Android 9 Pie hadda waa laga heli karaa adduunka oo dhan Galaxy Tab S4 | Androidsis
Bishii Abriil ee la soo dhaafay, wiilasha Samsung waxay bilaabeen inay geeyaan, dhowr waddan (Brazil, France, India iyo Singapore) nuqulkii ugu dambeeyay ee Android Pie ee Galaxy Tab S4, oo ah nooca kama dambaysta ah ee bilaabay inuu sii daayo dhowr saacadood ka hor. laga heli karo dhammaan waddamada ay shirkadda Kuuriya suuqgeyso kiniinkan.
Bulgaria, Germany, Greece, Spain, Hungary, Italy, Israel, Holland, Portugal, Romania… Dhammaan dalalkan, cusboonaysiinta Android Pie ee Galaxy Tab S4 ayaa la heli karaaSababtan awgeed, bilowga caalamiga ah ee adeegsadayaasha qaabkani ay wax badan sugayeen ayaa ugu dambayntii la fuliyay.
Cusboonaysiinta Android Pie ee Galaxy Tab S4 ayaa na siisa astaamaha caadiga ah ee nooca sagaalaad ee Android, oo ay kujirto Samsung's One U lakabka is -habeynta, lakabka is -habeynta oo ka helay dib -u -eegisyo aad u wanaagsan labada isticmaale iyo saxaafadda khaaska ah.
Is -dhexgalkani wuxuu na siiyaa dheecaan badan, waayo -aragnimo aan xuduud lahayn. Maxaa ka sii badan, waxaa ku jira hab Habeen ah ku habboon adeegsadayaasha u adeegsada aaladdan iftiin hoose. Dareenkan, Samsung waxay kaga hormarisay Google Android Q, nooca xiga ee Android oo ugu dambayntii ku dari doona qaab mugdi ah.
Waxaan sidoo kale ka heli doonnaa horumar xagga hawlgalka iyo is -dhexgalka Bixby, marka lagu daro taageerada sawirada HEIF, oo ah qaab cabbiraya cabbirka sawirrada ku dhawaad ​​kalabar, oo bixiya tayo la mid ah qaabka JPEG.
Sida caadiga ah, cusboonaysiintaan waxaa loo sameeyaa heerar. Haddii aadan weli helin ogeysiiska kugu martiqaadaya inaad cusboonaysiiso Galaxy Tab S4 -kaaga Android Pie, waxaad gacanta ku hubin kartaa iyada oo loo marayo Dejinta> Cusboonaysiinta Software -ka iyo xulashada soo dejinta cusboonaysiinta gacanta.
Haddii aysan weli kuu muuqan, oo aadan sugi karin, waxaad dhex mari kartaa SamMobile guys websaydh oo soo dejiso si aad gacanta ugu rakibto aaladdaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Android 9 Pie hadda waa laga heli karaa adduunka oo dhan loogu talagalay Galaxy Tab S4
Dhawaan Vivo Z5x ayaa imaan doonta, moobayl leh shaashad daloolsan iyo batari weyn